Xuutiyiinta Yemen oo sheegay inay gantaalo ku garaaceen qasriga Boqortooyada Sacuudiga | Xaysimo
Home War Xuutiyiinta Yemen oo sheegay inay gantaalo ku garaaceen qasriga Boqortooyada Sacuudiga
Xuutiyiinta Yemen oo sheegay inay gantaalo ku garaaceen qasriga Boqortooyada Sacuudiga
Kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanto gudaha dalka Yemen, ayaa sheegatay Mas’uuliyadda weerar Gantaalo ah oo lagu garaacay gudaha dalka Sacuudi Carabiya oo hoggaaminayo duulaankii lagu qaaday Yemen dhawr sano ka hor.
Kooxdan ayaa sheegatay inay Gantaalo ku garaacday gudaha qasriga boqortooyada Sacuudi Carabiya, sida lagu daabacay warbaahinta ku hadasho afka kooxdaan.
Wasaaradda difaaca dalka Sacuudiga ayaa sheegtay in laba ruux dhaawacyo fudud soo gaareen markii darbiyo ku dumeen intii uu socday hawlgalkii gantaladaas looga hor tagayay.
Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa dhawr jeer weerar gantaalo ah ku qaaday gudaha Sacuudiga, waxayn taas keentay inay Sacuudiga xirto dhawr garoon oo kuwa diyaaradaha ah oo ku yaalo magaalooyinka u dhow dhow Xuduuda Yemen markii ay duqeeyeen kooxdaan.
Xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhawr sano ka hor weerar ku qaaday dalka Yemen, iyagoo sheegay inay soo afjarayaan kooxda Xuutiyiinta balse illaa hadda laguma guuleysan, waxaana dowladaha howlgalkaan hoggaaminayey kasoo gaaray khasaaro nafadeed iyo mid dhaqaale.